» नेपाल स्टारले गुमाएको आवाज
नेपाल स्टारले गुमाएको आवाज
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १७:२७
चन्द्र घलान,मकवानपुर, १९ साउन । नेपाल स्टारको षडज राउण्ड अन्तर्गत दोस्रो भागबाट १५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिएका छन् । षडज राउण्डको दोस्रो भागमा प्रतिस्पर्धा गरेका २७ जना मध्ये १२ जना तेस्रो राउण्डका लागि छानिएसँगै १५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिएका हुन् । यी १५ प्रतियोगीहरुले अडिसन राउण्डमा निर्णायकहरुको मन जितेर दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका थिए । उनीहरुले दोस्रो राउण्डमा पनि निकै राम्रो प्रस्तुति दिएका थिए । तर शोमा जसरी भएपनि केही प्रतियोगीहरुलाई छनौट गरेर अगाडि लानुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपाल स्टारले यी १५ जना होनहार प्रतियोगीहरुलाई गुमाएको हो । यस भिडियो सामग्रीमा हामी तिनै १५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा अनि उनीहरुको सांगितिक यात्रामा संघर्षका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यसअघि नै हामीले पहिलो भागबाट बाहिरिएका १५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ । प्रतियोगिताका अन्य प्रतियोगीहरुबारे जान्न हाम्रा च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो–
१६) नविन्द्र राई–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको सोह्रौँ आवाज हुन् नविन्द्र राई । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका नविन्द्रले षडज राउण्डमा गोपाल योञ्जनको आवाजमा रहेको ‘देशले रगत मागे’ बोलको गीत गाएका थिए । निक्कै नै राम्रो गीत गाएका उनलाई निर्णायकहरुले ताली बजाएर प्रशंसा गरेका थिए । उनमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि रहेको निर्णायकहरुले बताए । खोटाङ निवासी नविन्द्र संगीत पनि सिकाउँछन् । विभिन्न कभर गीत प्रतियोगिताहरुमा पनि सहभागी भईरहने नविन्द्र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि प्रस्तुति दिन्छन् ।
१७) उजय कुमार सहनी–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको सत्रौँ आवाज हुन् उजय कुमार सहनी । बर्दिबास अडिसनबाट छानिएका उजयले षडज राउण्डमा योगेश्वर अमात्यको आवाजमा रहेको ‘लैजा चरी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले सुरमा केही सुधार गर्नुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । सर्लाहीको भक्तिपुर निवासी उजयले कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दादेखि नै गायन क्षेत्र समातेका हुन् । भजन गाउन सरिक हुने बुवाबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा पाएका उजयले संगीत क्षेत्रमा संघर्ष गरेरै भएपनि सफल हुने लक्ष्य राखेका छन् । उजयका बुवा भजन गाउने र माछा मार्ने पेशामा आवद्ध छन् अनि उनका आमा बिरामी अवस्थामा छन् । तर पनि परिवारको साथ पाएर उनी संगीतमा अघि बढेका छन् ।
१८) शिव विक–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको अठारौँ आवाज हुन् शिव बिक । बुटवल अडिसनबाट छानिएका शिवले षडज राउण्डमा राजु लामाको आवाजमा रहेको ‘मेरो नेपाल’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा सुर र हाईनोटको सुधार जरुरी रहेको निर्णायकहरुले बताए । तर उनको बेस भ्वाईस निक्कै राम्रो लागेको निर्णायकहरुले बताए । उनको प्रस्तुतिहरु अडिसन राउण्डमा भन्दा राम्रो भएको समेत निर्णायकहरुले बताएका छन् । शिव पेन्टिङको काम गर्ने उनी बताउँछन् ।
१९) निशान बराल– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको उन्नाईसौँ आवाज हुन् निशान बराल । पोखरा अडिसनबाट छानिएका निशानले षडज राउण्डमा दिपक खरेलको ‘तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति राम्रो भएता पनि केही रियाजको पनि आवश्यकता भएको बताएका थिए । पोखराका निशान आफ्नो आमासँगै बस्छन् । बुवाले दोस्रो विवाह गरेपछि उनको लागि आमाले नै संगीतको बाटो डोराएको उनी बताउँछन् । आमा र गुरुहरुको हौसलाका कारण आफु संगीत क्षेत्रमा लागेको उनी बताउँछन् ।
२०) चन्द्रबहादुर पुन– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको बिसौँ आवाज हुन् चन्द्रबहादुर पुन । चितवन अडिसनबाट छानिएका उनले षडज राउण्डमा मञ्जरी चलचित्रको ‘दैव हे’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले हाई रेञ्जमा गाएका कारण निर्णायकहरुले त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । उनी यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागी भएका थिए ।
२१) सुमित पौडेल– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको एक्काईसौँ आवाज हुन् सुमित पौडेल । बुटवल अडिसनबाट छानिएका सुमितले षडज राउण्डमा भक्तराज आचार्यको ‘हजार सपनाहरुको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाजको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए तर उनको टाईमिङहरुमा सुधार्नुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । भैरहवाका सुमित अहिले ब्याचलर फस्र्ट ईयरमा अध्ययनरत छन् । सानोमा भजनहरु गाउँदै गायन यात्रा थालेका उनले पछि संगीतलाई नै प्यासन बनाएका बताउँछन् । हाल संगीत समेत सिकिरहेका उनी कुनै समयमा स्थानीय स्तरमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन चाहान्थे । तर आयोजकले आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई मात्र सहभागी हुन दिएपछि उनी कहिलेकाँही आफु फ्रस्टेसनमा गएको पनि बताउँछन् ।
२२) तारा थापा– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको बाईसौँ आवाज हुन् तारा थापा । सुरखेत अडिसनबाट छानिएकी ताराले षडज राउण्डमा सञ्जीवनीको आवाजमा रहेको ‘डाँडापाखा छाहारीले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुति राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका छन् साथै उनका केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा पनि निर्णायकहरुले जोड दिएका छन् । नेपालगञ्जको कोहलपुर चिसापानी निवासी तारा सानैदेखि गीत गाउन रहर गर्थिन् । पढाईमाभन्दा संगीतमा रुचि राख्ने गरेकी तारा गजल गायिकाका रुपमा पनि चिनिन्छिन् । आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुका साथै गायनमा अभ्यास गर्न र सक्रिय रहनसक्ने भएकोले आफुले गजल गायन सुरु गरेको उनी बताउँछिन् । उनका केही चर्चित गीतहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
२३) मनिशा राना– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको तेईसौँ आवाज हुन् मनिशा राना । पोखरा अडिसनबाट छानिएकी मनिशाले षडज राउण्डमा योगेश काजीको ‘दैव हे’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए । स्याङ्जाकी मनिषा अहिले पोखराको न्यूरोडमा बसोबास गर्छिन् । आमा र बहिनीहरुसँगै बस्दै आएकी मनिशाले बिगत ३ वर्षदेखि संगीत सिक्दै छिन् । आमाको संघर्षबाट पाठ सिकेकी मनिशा संगीतमा निकै रुचि राख्छिन् । उनी मिस कल्चर नेपाल २०२० की फाईनालिष्ट पनि हुन् । उनले उक्त प्रतियोगितामा मिस एक्टिभको टाईटल पनि जितेकी थिईन् । उनी नेपाल आईडल सिजन ३ मा पनि सहभागी भएकी थिईन् ।
२४) मिलन खपाङ्गी– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको चौबिसौँ आवाज हुन् मिलन खपाङ्गी । बर्दिबास अडिसनबाट छानिएका मिलनले षडज राउण्डमा गुलाम अलिको आवाजमा रहेको ‘लोलाएका ति ठूला’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाज मिठो भएता पनि नोटहरुमा समस्या भएको निर्णायकहरुले बताएका छन् ।
२५) रोहन श्रेष्ठ– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको २५ औँ आवाज हुन् रोहन श्रेष्ठ । ईटहरी अडिसनबाट छानिएका रोहनले षडज राउण्डमा श्याम कार्कीको आवाजमा रहेको ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ बोलको बहुचर्चित गीत गाएका थिए । उनको आवाज मिठो भएको भन्दै निर्णायकहरुले नोटहरुमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । धरानमा बसोबास गरिरहेका रोहनको स्थायी घर तेह्रथुम म्याङलुङमा पर्छ । करिब ४ वर्षदेखि धरानमै बसेर अध्ययनसँगै संगीत क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल रहेका रोहनका केही कभर गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् ।
२६) पारश थापा–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको २६ औँ आवाज हुन् पारश थापा । पोखरा अडिसनबाट छानिएका पारसले षडज राउण्डमा दिप श्रेष्ठको आवाजमा रहेको ‘मेरो आँखामा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुका बारेमा निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । उनी पोखराको बाटुले चौर निवासी हुन् ।
२७) निशा कार्की– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको सत्ताईसौँ आवाज हुन् निशा कार्की । ईटहरी अडिसनबाट छानिएकी निशाले षडज राउण्डमा सिने गुरुङको ‘मेरो प्यारो’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिपश्चात निर्णायकहरुले के भने त्यो भने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थिएन ।
२८) दिपिका बस्नेत– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको अठ्ठाईसौँ आवाज हुन् दिपिका बस्नेत । सुर्खेत अडिसनबाट छानिएकी दिपिकाले षडज राउण्डमा सविन राईको ‘नमूना’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा निर्णायकहरुले उनलाई सुझाव दिएका थिए । अध्ययन र गायनका अलावा बाईक स्टन्टमा समेत अग्रसर दिपिका टिम ओसाईरिसमा आवद्ध छिन् । बाईक रेसिङमा पनि उनी प्राय सहभागी हुन्छिन् । सानैदेखि गाउन सुरु गरेकी दिपिका अभाया एण्ड द स्टीम ईञ्जीन्स ब्याण्डले आयोजना गरेको उमन ईन कन्सर्ट प्रतियोगितामा पनि सहभागी भइसकेकी प्रतियोगी हुन् । विभिन्न कन्सर्टहरुमा पनि दिपिकाको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । घरबाट पनि उनलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न सहयोग भएको उनी बताउँछिन् ।
२९) अंकित लुईटेल– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको उनान्तिसौँ आवाज हुन् अंकित लुईटेल । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका अंकितले षडज राउण्डमा एड्रियन प्रधानको ‘मुटुभरी भरी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको गायन र मुडको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उनले यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । संगीत क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेका अंकितको नेपाल स्टार यात्रा भने रोकिएको छ ।
३०) सोहिल शाहु– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको तिसौँ आवाज हुन् सोहिल शाहु । धनगढी अडिसनबाट छानिएक सोहिलले षडज राउण्डमा द एज ब्याण्डको ‘जिउनलाई गाह्रो भो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले गीतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बारेमा निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । क्वेस्ट ब्याण्डमा गितारिष्टका रुपमा आवद्ध भएका उनी संगीत क्षेत्रमा संघर्षरत छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।